:: My Little World ::: Red Polo Tee on T-Shirt Day
Posted by Nay Nay Naing at 10/17/2008 10:23:00 PM
မဖြေလဲ သိပါတယ်. Size Small ပါ။ တချက်ငဲ့ ကြည့်လိုက်ရုံနဲ့ မမ က သိပါတယ်။
Saturday, October 18, 2008 12:56:00 AM
2007က တီရှပ်က မီးခိုးရောင်လေးပါတာလား။
ဒါဆို ဒီနှစ်ရှပ်ဆိုဒ်က ပိုသေးနေတယ်နော်။
Saturday, October 18, 2008 1:51:00 AM
တွေ့လား ထောက်ခံတဲ့သူတွေ များနေပြီ။
အစ်မ ခင်ဦးမေ... Size Small ဆို အစ်မ အဖြေမှားပါတယ်ကွယ်... :P
မမွန် .. ဟုတ်တယ်.. မမွန်ကို လွမ်းလို့စားမ၀င် အိပ်မပျော်ဖြစ်ပြီး ပိန်သွားတာပါ ..... :D
၂၀၀၇ တုန်းက TShirt တွေကို size စုံမထုတ်ပဲ ၂၀၀၈ မှာမှ size စုံထုတ်လို့ ပါ။
ဒါကြောင့် မနေ့က နေနေကို အဲ့ဒီ စပို့ရှပ်နဲ့ မြင်ရတာကိုး ထင်တော့ထင်သား နေနေ၀တ်နေကြ အရောင်မျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးလို့။
ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူး မှတ်မိသလောက် နေနေအဲ့လိုဝတ်တာ မမြင်ဘူးလို့။
I guess you all might be wrong this time. "XL size" was run out this time and she only managed to get "Small Size".
Sunday, October 19, 2008 3:06:00 PM
မထက် >> ဟုတ်တယ် ဒီလို အင်္ကျီအရောင် ကိုယ့်ဟာကိုဆို ဘယ်ဝယ် ၀တ်ပါ့မလဲ.. အလုပ်သွားတုန်းက တခြား အင်္ကျီဝတ်သွားပြီး အဲဒီ အင်္ကျီကို အလုပ်ရောက်မှ လဲတာ။ အပြန်မှာ အလုပ်ရှုပ်သွားလို့ပြန်လဲဖို့မအားတာ နဲ့ဒီအတိုင်း ထွက်လာလိုက်တာ :D
Anonymous >> XL size ကို မှ ၀တ်တဲ့သူကို Size မရှိလို့ ဆိုပြီး Small Size ၀တ်ခိုင်းလို့ ရသလား... Small Size သမားကို Size မရှိလို့ ဆိုပြီး XL ၀တ်ခိုင်းတယ် ဆို ဟုတ်သေးတယ်.. မှန်းတယ် ဆိုလဲ ဖြစ်နိုင်တာလေး မှန်းလေ...
အနီရောင် ၂၀၀၈ အင်္ကျီက ဒီက
ဇယားနဲ့ယှဉ်ရင် တော့ Small Size ဆိုတာ သေချာတယ်ဗျ။ ဒါပေမဲ့ မခင်ဦးမေ အဖြေမှားတယ်ဆိုတော့ မဟုတ်မှ လွဲရော
(မဟုတ်မှတော့ လွဲတော့မပေါ့လေ.... ) ဒီက အညွှန်းနဲ့
ဆိုရင်တော့ Junior ထဲက Medium ပေါ့ဗျာ....
ဘာလို့ အဲလိုပြောသလဲ ဆိုတော့ ၂၀၀၈ အင်္ကျီရဲ့ လည်ပင်း (ကော်လဲ အောက်ခြေ)ကနေ အောက်ဆုံးထိက စုစုပေါင်း
အရှည်က more or less 22 လက်မပဲ ရှိတယ်ဗျ။
ငယ်ငယ်က ဥာဏ်စမ်းပဟေဠိ ဖြေတာ ၀ါသနာပါလို့ လေနည်းနည်း ၀င်ရှည်ကြည့်တာပါ....
မှားရင်တော့လည်း မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ... နော.....
၂၀၀၈ TShirt ၂၀၀၇ ထက်စာရင် ကပိုသေးတယ်နော်။ Looks like you are shrinking.
Saturday, October 25, 2008 4:31:00 PM
မောင်လူအေး >> ကျွန်မ လုပ်တာ နဲ့အလုပ်ရှုပ်သွားတယ် ထင်တယ်.. အင်္ကျီဆိုဒ်တွေ ကြည့်လို့့ရတဲ့ Website တွေအတွက် ကျေးဇူးပါပဲ။
အင်္ကျီဆိုဒ်တွေက ၂၀၀၈ က အသေးတကာ့ အသေးဆုံး နဲ့၂၀၀၇ က ဆိုဒ်အသေး ပါ။
ဒီနှစ်အတွက် Small ထက်သေးတဲ့ Size ပါ ရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။ အလုပ်မှာ ပိန်တဲ့သူတွေ များတယ်ထင်ပါတယ်..
Soe Moe >> အေး.. ကျုံ့ သွားတာ နေမယ်.. ဟားဟား.. ပိန်သွားတယ်ဟ...